Google: 48 Gobollada Mareykanka ayaa bilaabay baaritaan ku saabsan monpoly ads - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Google: 48-da Mareykanka waxay bilaabeen baaritaan ku saabsan xayeysiinta xayeysiinta
Google: 48-da Mareykanka waxay bilaabeen baaritaan ku saabsan xayeysiinta xayeysiinta
50 Qareennada Guud ee Mareykanka, oo uu hogaaminayo Texas, waxay bilaabayaan baaritaan ay ku ogaanayaan haddii Google uu ku xadgudbayo shuruucda hanti-goosadka, iyadoo laga bilaabayo mowqifkeeda ugu weyn ee xayeysiinta internetka.
Aruurinta naadirnimada ah ee gobollada 48 ee Mareykanka iyo qareennada guud ee 50 waxay raadinayaan inay go'aamiyaan heerka ay gaarsiisan tahay warbixinnada Google CBS News. Haddii ay soo baxday in Google ay noqotay mid wax ku ool ah waxay sidoo kale su'aal ka qabtaa awooddeeda ah inay si sahal ah uga hor tagto tartanka, inkasta oo sharciga khilaafsan. Xeer ilaaliyaha guud ee Texas Ken Paxton wuxuu yiri, “Tani waa shirkad xukuma dhamaan wajiyada xayeysiinta internetka: iibsashada, iibinta iyo xaraashka. [...] Haddii kharashaadka xayeysiinta ay sarreeyaan, xayeysiiyaha ayaa bixinaya wax badan, isla markaana si aan toos ahayn u saameyn doona macaamilka dhamaadka silsiladda. Qareenka guud ee California iyo Alabama ma aysan dooran inay ka qeybqaataan baaritaanka. Shirkadda waalidiinta ee Google, Alphabet, waxay ka sameysay 137 bilyan oo doollar dakhliga 2018, waxayna ku sameysay dakhliga 31 bilyan.
Rafaaqi goobjoog ah
Way adag tahay maanta in la qiyaaso Internetka la'aantiis Google iyada oo shirkadda, Octopus run, ay howlaheeda ka fulisay dhinacyo badan. Ololaha Degoglers Internet of Framasoft iyo baaritaanno sida Xogta ay Google aruuriso waxaan kaa siinaynaa fikrad fiican oo ku saabsan qabsashadda internetka ee internetka. Raadinta 9 ee 10 waxaa lagu sameeyaa Raadinta Google, bilyan 1,5 dadka ayaa adeegsata Gmail iyo malaha Gsuite-ka oo ay ku jiraan Google Drive, Dukumiintiyo, Waraaqo, Muuqaalo iyo aalado kale. Adeegga Google waxaa loo isticmaalaa in lagu xaqiijiyo ansaxnimada shahaadooyinka kahor helitaanka degel, sidaa daraadeed waxaan u isticmaalnaa kaabayaasheeda haddaan rabno iyo haddii kaleba. Qareenka Arkansas Leslie Rutledge wuxuu sharraxaa sababihii kaqeybgalkeeda sahanka: "Markii gabadhaydu xanuunsan tahay oo aan talo raadsado ama takhtarka ugu fiican, waxaan rabaa sida ugufiican - talo ugu fiican ama dhaqtarka ugufiican - maahan midka sida ugu badan ku bixiya xayeysiinta ".
Hal sahan oo dheeraad ah
Yurub dhexdeeda, Google waxaa lagu xukumay inuu ku dhiirrigeliyay Google Shopping mashiinkiisa raadinta, in kasta oo ay shirkaddu racfaan ka qaadatay. Bishii Maarso, waxaa lagu ganaaxay 1,7 bilyan oo ganaax ah iyada oo la gelinayo weedhyada ka-saarista ee lala yeelanayo lammaanaheeda, iyada oo la gelisay tartamayaasheeda mid aan faa'iido lahayn. Waaxda Caddaaladda ee Mareykanka, Guddiga Ganacsiga ee Federalka iyo Congress-ka ayaa sidoo kale bilaabay baaritaano ku saabsan Google iyo Facebook.
Google waxay ugaarsan lahayd shabakadaha leh boggag internet oo qarsoon
BBC waxay ku biirtay Google, Facebook iyo Twitter si ay ula dagaallamaan wararka been abuurka ah
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/google-48-etats-americains-lancent-une-investigation-sur-son-monopole-publicitaire-326961
Apex Legends: Respawn madadaalo ayaa ku dhawaaqday siidaynta nooc jireed bishii Oktoobar